XRP Ledger: Meel Faa'iido Leh oo Farsamada Blockchain | Laga soo bilaabo Linux
Sidaan aragnay muddooyinkii dambe, the Baaxadda DeFi badiyaa wuxuu u taagan yahay oo keliya Cryptocurrencies iyo hantida kale ee crypto ee ay hab-nololeedka farsamada-dhaqaale ee furan. Haddii kale, codsiyo badan, sida boorsooyinka jeebka, farriimaha iyo hababka lacag -bixinta, iyo codsiyada ganacsiga ama la socodka suuqa, iyo kuwo kale.
Sida, teknolojiyaddeeda badan ee nidaamyada ama aaladaha (shabakadaha) ee ku saleysan xannibaadaha (xannibaadda). Inaad ka mid noqoto, "XRP Ledger" taas oo asal ahaan ah a tiknoolajiyadda xannibaadda furan, oo si weyn loo adeegsado waaxda bangiyada caalamiga ah. Iskusoo wada duuboo, maxaa yeelay waxay u shaqaysaa oggolaansho la'aan (oggolaansho la'aan) iyo hab aan baahsanayn, maareynta si deg deg ah u xallinta macaamilka (Laga bilaabo 3 illaa 5 sekan).
Tan iyo tan, tan Farsamada DeFi xiriir dhow la leh Teknolojiyada Xisaabaadka loo Qaybiyey (DLT) iyo fikradaha kale, oo aan wax ka qabannay waqti ka waqti waqtiyadii hore, isla markiiba waxaan ka tagi doonnaa xiriirrada la sheegay qoraallo hore oo la xiriira. Si markaa, haddii loo baahdo, si fudud loogu akhriyi karo dhammaadka akhrinta daabacaadan:
"Teknolojiyadda Ledger -ka ee la qaybiyey, oo sidoo kale loo yaqaanay soo gaabinteeda Ingiriisiga DLT laga bilaabo weedha “Teknolojiyadda Ledger -ka La Qaybiyey” ayaa inta badan loo adeegsadaa dhinaca horumarka gaarka ah, laakiin waxaa ku jira Blockchain Technology, oo asal ahaan isku mid ah laakiin beerta horumarinta dadweynaha. DLT waxay kaliya u tilmaamaysaa farsamada si dhammaystiran, taas oo ah, teknolojiyadda ka dhigaysa macaamil ganacsi suurtogal ah intarneedka hab aamin ah oo aan dhex -dhexaadin, iyada oo loo marayo keydka xogta la qaybiyey, kaas oo dammaanad -qaadaya isbeddelka iyo ilaalinta qarsoodiga xogta.. " Hantida 'Crypto Assets' iyo 'Cryptocurrencies': Maxaan ogaan karnaa kahor intaan la isticmaalin?
1 XRP Ledger (XRPL): Xayiraad baahsan oo baahsan
1.1 Waa maxay XRP Ledger?
1.2 Ku saabsan XRP, Ripple iyo inbadan
1.2.3 La ruxay
XRP Ledger (XRPL): Xayiraad baahsan oo baahsan
Waa maxay XRP Ledger?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah ka soo saarayaasha farsamada «Ledger-ka XRP», waa:
"Xayiraad iyo waaritaan, xannibaad dadweyne iyo baahsan, oo ay maamusho bulsho caalami ah oo horumariyayaal ah. Taasi waxay u taagan tahay si dhakhso leh, tamar leh oo la isku halleyn karo. Iyo taageeradooda aadka u wanaagsan si loo horumariyo horumarada gudaheeda, kharashaadka macaamilkiisu hooseeyo iyo beel weyn oo khubaro ah oo siiya horumariyayaal saldhig adag oo furan si ay u fuliyaan mashaariicda ugu baahida badan, iyada oo aan waxyeello dammaanad weyn u lahayn deegaanka.. "
Waxay sidoo kale ku daraan Websaydhka rasmiga ah ee GitHub hantida "Ripple", tiknoolajigu wuxuu yiri:
"Hagaajiyaha qarsoodiga ah ee aan baahsanayn oo ay ku shaqeyneyso shabakad ka mid ah server-ka-dhigga (P2P). Kaas oo waliba adeegsada sheeko cusub oo khaldan ee dulqaadka qaladka Byzantine si loo dejiyo oo loo diiwaangeliyo macaamilka xog sugan oo la qaybiyey oo aan lahayn hawlwadeen dhexe. "
Nota: Tan iyo dulucda Algorithms -ka la isku raacsan yahay iyo Teknolojiyadda DLT aad buu u dheer yahay, xiriiriyeyaasha soo socda ayaa loo sahamin karaa macluumaad dheeri ah: 1 link y 2 link.
Ku saabsan XRP, Ripple iyo inbadan
Marka la eego, XRP Ledger (XRPL) Waa a farsamada il furan kuwaas oo uu qof kasta ku horumarin karo mashaariicda, tan waxaa inta badan si fiican u yaqaan mashaariic kala duwan iyo ururo isticmaalay. Kuwaas waxaan ka xusi karnaa kuwan soo socda:
Cryptoactive ama cryptocurrency -ka hooyo ee XRP Ledger oo ka shaqeeya RippleNet (Platform Payment Digital) oo iyaduna, ka shaqaysa XRP Ledger (Diiwaanka kaydiyaha qaybiyay). Waxaana abuuray shirkadda Ripple si ay u noqoto mid dhakhso badan, ka jaban oo ka beddel badan beddelka hantida kale ee dijitaalka ah iyo aaladaha lacag -bixinta sida SWIFT. Sidaa darteed, waa hanti dadweyne, oo ka madax bannaan dhiggooda, oo loogu talagalay inay u adeegto sidii buundo u dhexaysa lacagaha badan ee Fiat ee jira.
udhaqaajiyaa (Ripple X)
Shirkad gaar loo leeyahay oo dhistay kuna shaqaysa shabakad lacag bixin iyo sarrif oo la yidhaa RippleNet oo ku taal XRP Ledger. Ujeeddadeeda ugu weyni waa in la isku xiro bangiyada, bixiyeyaasha lacag -bixinta iyo is -weydaarsiga hantida dhijitaalka ah, oo awood u siineysa lacag -bixinno caalami ah oo dhaqso badan oo faa'iido badan leh. Waxayna u isticmaashaa XRP si ay gacan uga geysato dhisidda Internetka Qiimaha si lacagtu ay ugu dhaqaaqdo sida ugu dhaqsaha badan oo hufan sida xogtu maanta tahay.
Software -ka server ee awood u leh XRP Ledger. Waxaa lagu heli karaa ruqsadda ISC ee oggolaanshaha furan. Sidoo kale, waxay ku qoran tahay ugu horreyn C ++ waxayna ku socotaa goobo kala duwan. Marka lagu socodsiiyo habka ansaxinta waxay u oggolaaneysaa ku -xirnaanta shabakadda XRP Ledger, isku -gudbinta macaamil -gacmeedyada la saxiixay, iyo dayactirka nuqulka maxalliga ah ee dhammaystiran ee hoggaamiyeyaasha caalamiga ah, taas oo ah, XRP Ledger (Database of Record loo qaybiyey).
Shabakadda lacag -bixinta dhijitaalka ah oo ay maamusho shirkadda la yiraahdo Ripple, oo bixisa xiriirro boqolaal hay'adood oo maaliyadeed oo adduunka oo dhan ah iyada oo loo marayo hal API, oo u oggolaanaysa macaamilidda lacagta fiat -ka in loo sameeyo si dhaqso leh, ka raqiisan oo lagu kalsoonaan karo dhammaan kuwa ku lug leh.
Haddii aad rabto inaad dhex gasho wax kasta oo la xiriira faylka farsamada il furan de "XRP Ledger", Ripple, RippleNet iyo XRP 2da xiriiriye ee soo socda ayaa la sahamin karaa: 1 link, 2 link y 3 link.
Soo koobid, "XRP Ledger" waa sheeko cusub tiknoolojiyadda isha furan ee ka socota aagga DeFi, oo ku salaysan adeegsiga Blockchain ama DLT, kaas oo ku jira horumar buuxa iyo korsasho by waaxda bangiyada caalamiga ah, si ay u siiso isticmaaleyaasheeda iyo macaamiisheeda adeegyo ka fiican, aad uga dhakhso badan oo lagu kalsoonaan karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » XRP Ledger: Faa'iido Farsamaysan oo Blockchain Technology ah